Webmaster – Page 2 – 4Jehovah (Yehowa)
Wↄn a woafi Yehowa Adansefo mu ma Yehowa Nyankopↄn-Tra ase ma Yehowa Nyankopↄn na wↄsom no Ahofadi mu!
Wɔapa ɔwɛn aban gyidi ho ntama
–Onyankopɔn hann rehyerɛn wɔ Yehowa Adansefo gyidi so
– Wɔahyehyɛ Ɔwɛn Aban Asafo gyidi mfomso no wɔ ɔkwan a ɛne nea Bible kyerɛkyerɛ no wɔ ɛfᾱ ne ɛfᾱ ma ayɛ ntotoho.
Continue reading “Wɔapa ɔwɛn aban gyidi ho ntama”
Author WebmasterPosted on April 16, 2013 January 6, 2014 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo GyidiTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Gyidi ne Nnwuma, Honhom kronkron, Mpaebɔ ԑkɔ Yesu nkyԑn, Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nkwagye, Nyankopɔn Baasakoro No, Owu Akyi Asetena
Wo fi ɔwԑn aban ahyehyԑde no mu – na woakɔ ԑhe?
Ԑmfa ho bere tenten a woatra a Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no mu no, sԑ wofi mu a ԑma wohyia gyinaesi ho nsԑnnennen. Minim, efisԑ mifii Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no mu mfe 13 akyi a mede me mmeranteberem ahoɔden yԑe Yehowa dansefo mmɔdenbɔfo. Asԑmmisa a emu yԑ duru ma wɔn a wɔpԑ sԑ wofi Ɔwԑn Aban no mu ԑne sԑ “Ԑhe na yԑfi ha yԑbԑkɔ?
Ebinom fam no ԑte sԑ nea wofi owia ase akɔtɔ ogya mu, de wɔnho hyԑ nnurubɔne nom, ɔbraseԑ ɔkɔwensa ne nneyԑe afoforo mu. Ɔwԑn Aban Asafo ani gye ho sԑ wɔde saa nneԑma bɔne yi yԑ osuahu a ԑbԑto wɔn a wofi “Nokware no” mu. Ebinom nso a wofi mu no nya adwenem haw- a ԑhyԑ wɔn so kԑse. Ebinom fi ase sԑ wɔbԑhwehwԑ “Onyankopɔn Nokware Ahyehyԑde” ma wɔkɔ ɔsom ahorow nanso emu biara di wɔn huammɔ. Ebinom nso hu Ahyehyԑde bi anaa ɔsom akuw bi a ԑbԑyԑ sԑ ɔwɔ “Nokware Ankasa no”. Nnipa pii pa abaw wɔ ɔsom ahorow nyinaa ho ma enti wɔbɔ wɔn “bra a ɔsom mfa wɔnho’’ na mmom wɔde wɔn ani si wabusua, wadwuma ne wafie so a wompԑ sԑ wobesusuw Nyamesom ho koraa. Continue reading “Wo fi ɔwԑn aban ahyehyԑde no mu – na woakɔ ԑhe?”
Author WebmasterPosted on April 10, 2013 May 12, 2013 Categories Nsԑmmisa Wɔtaa Bisaa ne Mmoa a Wɔde ma Yehowa Adansefo, Woafi Yehowa Adansefo muTags Nkwagye, Nokware No, Ԑhe na Yԑnkɔ
Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu?
.: YESU ƆSƆREE FII AWUFO MU WƆ HONHOM NIPADUA A ANIWA NTUMI NHU?–Yeahu Ɔwɛn Aban Adwene a ɔwɔ Wɔ Owusɔre Ho –
OWUSƆRE NO HO AKYINNYEGYE – TETEFO ADWENEKYERԐ
ADWENE A ԐBƆ SԐ NIPADUAM WUSƆRE GU.
ADWENE ԐBƆ GU #1: YESU NIPADUA-AFƆREBƆ A ԐTWA TO.
ADWENE A ԐBƆ GU #2: ADAM A ODI AWIEI NO HONHOM NKWA MAFO:
ADWENE A ԐBƆ GU #3. ƆTRAA NKWA MU WƆ HONHOM MU
ADWENE A ԐBƆ GU #4: HONHOM NE MOGYA NTUMI NNYA ƆSORO
ADWENE ԐBƆ GU #5: WOANHU YESU
ADWENE A ԐBƆ GU #6: ANWONWADE A ƆYԐE
OWUSƆRE ANAASԐ AWO FOFORO?
SO MIKAEL ƆNE YESU A ONYANEE NO?
SO KRISTOFO NYINAA BENYA OWUSƆRE NIPADUA?
Continue reading “Yesu ɔsɔree fii awufo mu wɔ honhom nipadua a aniwa ntumi nhu?”
Author WebmasterPosted on April 3, 2013 June 21, 2014 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo GyidiTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Mikael Ɔbɔfopɔn no, Nipakō Yesu Kristo yɛ, Owu Akyi Asetena, Owusɔre, Ɔsoro, Paradise ne Ahenni no
Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu
“Kojo”– Ɔde neho bɔe Ɔwɛn Aban no wɔ mfe 1996 mu, bere a owiei sukuu a edi kan a na woadi mfe 15. Obiara ne no ansua Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde nhoma biara sɛnea na wɔtaa yɛ ansa na obi de neho bɛdɔm wɔn som no.
N’abusua ne abusua santen nyinaa mu nnipa biara nni hɔ a n’ani gyei Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde som no ho, nanso eyi anhaw no. Amonom hɔ ara a, ɔde neho bɔɔ Ahyehyɛde no ara na ofii ase hyɛe afie ne afie asɛmpaka adwuma ase wɔ afe 1997 mu, a ɔne Yehowa Danseni adamfo bi a ɔno nso mmmɔɔ asu.
Wɔ afe 2000 mu no, Kodwo hyirae ne ho so maa Onyankopɔn gyei asubɔ. Wɔ n’asubɔ akyi bere tiawa bi no, ɔbɛyɛe nsi wɔ asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mu wɔ ne sukuu nyinaa a ɔkɔe asasesin mu, efisɛ na Ɔwɛn Aban gyidi a woakyikyim no no ama woagye adi sɛ wɔn som ne Onyankopɔn asase so Ahyehyɛde biako pɛ a ɛwɔ hɔ a ɔrekyerɛkyerɛɛ nnipa a wobetie asɛmpaka no de wɔn akɔ nkwagye mu, efisɛ nsɔre no nyinaa yɛ atoro. Kodwo gyei toom mu, efisɛ na osusuwii sɛ sɛ asɔre bi bɛyɛ nokware a ɛsɛ sɛ ne gyidi ne nkyerɛkyerɛ nyinaa gyina Bible no so. Nanso, na eyi nte saa wɔ nsɔre ahorow no mu, efisɛ na wogye gyidi ahorow a edidi so yi di: Wodi buronya ne Awoda, wɔnnnyɛ afie ne afie asɛmpaka adwuma no bi, wɔkyerɛkyerɛ sɛ nnipa apapafo nyinaa bɛkɔ ɔsoro, wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔde abɔnefo nyinaa bɛkɔ daa asotwe atrae, ne afoforo a ɛkeka ho. Continue reading “Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu”
Author WebmasterPosted on March 30, 2013 March 30, 2013 Categories Wɔn a Woafi More, Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no OsuahuTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Paradise ne Ahenni no
Nokwasԑm A Ɔwԑn Aban Asafo (Watchtower Society) Mpԑ SԑWohu
NOKWASԐM A ƆWԐN ABAN ASAFO (WATCHTOWER SOCIETY) MPԐ SԐ WOHU
Wᴐ afe apem ahankron ne aduɔkron ason (1997), na wɔwɔ Yehowa Adansefo a wɔka asԑmpa no bԑboro ɔpepem anum (5,000,000) de nnɔnhwerew bԑyԑ ɔpepepem biako (1,000,000,000) afe biara de ka asԑmpa no wɔ wiase nyinaa denneennen de boa Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde (Watchtower Organisation). Yehowa adansefo de nnamyԑ reka asԑmpa no wᴐ aman bԑboro ahanu ne aduasa (230), na wɔyԑ ɔsom a ԑrenya nkɔanim mtԑmtԑm wɔ kan USSR.
Yehowa adansefo ka de hoahoa wɔnho sԑ ԑsԑ sɛ nnipa ba wɔn som mu ansa wɔanya nkwagye.1. Ɔwԑn Aban Asafo no hyԑ Yehowa adansefo denneennen ma wodi wɔn nhyehyԑe ne akwankyerԑ so. Wɔ nhyiam ahorow a wɔyԑ no adapԑn no, wɔsan hwehwԑ sԑ Yehowa adansefo de nnɔnhwerԑw pii bԑkɔ asԑmpaka asram biara de kyekyԑ nsԑmma nhoma, afei so wɔyԑ Bible adesua ne nhwehwԑmu ahorow a ԑfa wɔn som adesua ho. Wɔabara Yehowa adansefo wɔ sraadi, wɔnnkyia fraaka, wɔnto aba mpa ɔmampanyi, wɔnnye mogya, wonni nnapɔna, awoda, buronya ne easter afahyԑ. Bio nso, wɔabara wɔn sԑ mma wɔnnkenkan nhoma a ԑkasa tia Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde denneennen. Mmere bi a atwam no Yehowa adansefo ne wɔn a wɔnnyԑ Yehowa adansefo mmɔ feku, na wɔmmfa wɔnho nhyԑ akansi, agumadi ne bɔlobᴐ mu. Wɔnnhyԑ sukuupɔn a obi bԑkɔ ho nkuran ma mpo wɔkasa tia no denneennen.2.
Anohyeto ahorow yi ne nnesoa a wɔde to Yehowa adansefo so no ma wɔtwe wɔnho fi nnipa ne abusua nkae ho, enti Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde bԑyԑ wɔn biribiara wɔ wɔn asetram. Sԑ Yehowa adanseni bi bu wɔn akwankyerԑ anaa Bible mmara so a wɔpam no fi Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no mu. Eyi nti obiara, sԑ abusuani, anuanom ne adɔfo nyinaa ne no nkasa, wᴐn ne no ndidi na mpo wɔakyia saa nnipa.3. Wɔ nnipa bebree fam no eyi yԑ tebea ne osuahu a ԑyԑ yaw kyԑn biribiara ma mpo ԑmma wɔte nka sԑ wɔabrabɔ nni mfaso bio. Esiane saa mmara ne nhyԑ a Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no de to Yehowa adansefo so no ma Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde nya Yehowa adansefo honam ne honhom fam asetra kwan so tumi, eyi nti ԑho hia kԑsԑ sԑ obi bԑyԑ nhwԑhwԑmu torodoo wɔ nea Ɔwԑn Aban Asafo no kyerԑkyerԑ ne nabakɔsԑm ansa na ɔde ne ho ato so. Continue reading “Nokwasԑm A Ɔwԑn Aban Asafo (Watchtower Society) Mpԑ SԑWohu”
Author WebmasterPosted on March 1, 2013 October 15, 2015 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Nokwasԑm A Ɔwԑn Aban Asafo Mpԑ Sԑ Wohu, Yehowa Adansefo Abakɔsԑm, Yehowa Adansefo GyidiTags Gyidi mu Nsakrae, Wiase Foforo Nkyerԑase
Dԑn Ne “Nokware No”
Suban a ԑtaa di akoten wɔ ɔsom a ɔkyerԑ sԑ ɔno nkutoo ne ɔkwan a ԑkɔ Onyankopɔn nkyԑn, ԑne sԑ ɔbԑhyehyԑ ahwehwԑde ahorow bi a ԑyԑ soronko agyina so sԑ ԑno na ԑkyerԑ nokware som biako nkutoo no.
Sԑ nhwԑso no, Mormonfo ayԑ nhoma a wɔde ma nnipa a woagye ɔsom no atom mfiase, a woato no din sԑ Nnyinasode 17 a Nokware som nkutoo wɔ! Esiane sԑ Mormonsom no yԑ ɔsom nkutoo a ɔka sԑ ɔwɔ ahwehwԑde dunson a woahyehyԑ wɔ nhoma no mu nti, Mormonfo gye di sԑ obiara ntumi nnya nkwage a edi mū gyesԑ ɔde ne ho dɔm Mormonsom.
Yehowa Adansefo ne Mormonfo som, nsonsonoe biara nni wɔn ntam wɔ ɔsom a ԑyԑ nokware no. Woasiesie wɔn nsԑmmawa (brochure) ahorow pii sԑnea ԑbԑtwe obi aba wɔn som mu. Ɔwԑn Aban de susuwde a ԑyԑ soronko na ԑkyerԑ sԑ ԑno ne Nokware no. Wɔ Yehowa Adansefo fam no, saa susuwde yi kyerԑ sԑ Ɔwԑn Aban yԑ Nokware Kristosom nkutoo no a ԑwɔ asase so nnԑ.
SO ƆWԐN ABAN SUSUWDE DA NO ADI SԐ ƆYԐ NOKWARE SOM KORO NO?
Nea edidi so yi yԑ susuwde a Ɔwԑn Aban de kyerԑ Nokware som biako no, saa susuwde yi wɔ Ɔwԑn Aban a wotintimii wɔ mfe 1996, kratafa 26-29, Dԑn na Onyankopɔn Hwehwԑ fi yԑn Ho: Continue reading “Dԑn Ne “Nokware No””
Author WebmasterPosted on February 26, 2013 February 28, 2013 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde
So Nyankopɔn Baasakoro No Yԑ Bible Nkyerԑkyerԑ?
“…yԑsom Nyankopɔn koro pԑ a ԑwom baasa, Nyankopɔn Baasakoro a wɔaka abom. Ԑnyԑ sԑ yԑnntumi nhu nsonsonoe ԑda wɔn ntam, anaasԑ wɔn gyinapԑn no mu kyekyԑ. Efisԑ Agya no yԑ Nyame Nipa biako, Ɔba no nso yԑ biako, ԑnna Honhom Kronkron nso yԑ biako. Nanso, Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron wɔn Nyame Ti no bom biako, wɔn anuonyam ne wɔn kԑseyԑ nyinaa yԑ pɛ ne koro, sԑnea Agya no te, saa ara na Ɔba no ne Honhom Kronkron no nso te. Agya no wɔammɔ no, Ͻba no wɔammɔ no saa ara na Honhom Kronkron nso wɔammɔ no. Agya no boro adwen ntease so, saa ara na Ɔba no ne Honhom Kronkron no nso boro adwen ntease so. Agya no te hɔ daa, Ɔba no te hɔ daa, saa nso na Honhom Kronkron no te hɔ daa. Nanso yԑnni Nyankopɔn baasa a wɔyԑ mmeresanten na mmom biako na ԑyԑ mmeresanten. Eyi nti Agya no yԑ Nyankopɔn, Ɔba no yԑ Nyankopɔn ԑnna Honhom Kronkron no nso yԑ Nyankopɔn. Nanso wɔnnyԑ Nyankopɔn baasa na mmom Nyankopɔn biako”-Athanasian Amanne. (Creed) Continue reading “So Nyankopɔn Baasakoro No Yԑ Bible Nkyerԑkyerԑ?”
Author WebmasterPosted on February 26, 2013 February 26, 2013 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyankopɔn Baasakoro No, Woredɔ Yehowa
Mεyԑ dԑn atumi ama Yehowa ani asɔ masetra!
MΕYƐ DƐN ATUMI AMA YEHOWA ANI ASƆ MASETRA!
“Obiara susuwii sε meyε bere nyinaa asomfo a mewͻ anigye ne nipadua mū ahosan. Meyε obi a bere nyinaa meboa afoforo a wͻwͻ nsεnnennen. Nanso bere koro no ara, na mete nka wͻ me mū sε miwuu. Dadwen ne adwenmuhaw hyεε me so.Midwenee sε menka nnipa ho, ԑmaa metee nka sε εsε sε meda mpamu damu no nyinaa. Bεyε ͻsram misrεe Yehowa sε ͻmma minwu-“Vanessa” –Ɔwεn Aban June 1, 1997, kr. 24.
So woate nka sε εmfa ho mmͻden biara a wobͻ no abasamtu nko ara na εhyia wo kwan? Saa, nanso wokͻ Ahenni Asa a ͻsrew ma woanim kyerε obiara sε biribiara rekͻso yiye,nanso wͻ wo adwenem no, wonim sε Yehowa ani nsͻ woasetra.
“Monkͻ so nsͻ nhwε sε mowͻ gyidi no mū, monkͻ so nsusuw mo ankasa senea mote. Anaa munnnhui sε Yesu Kristo te mo mū. Ende gye sε momfata”-1 Korintofo 13:5. Continue reading “Mεyԑ dԑn atumi ama Yehowa ani asɔ masetra!”
Author WebmasterPosted on February 25, 2013 April 19, 2013 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Abasamtu ne Adwenemhaw, Gyidi ne Nnwuma, Mpaebɔ ԑkɔ Yesu nkyԑn, Nkwagye, Nokware No
AHOFADI PAA – So wowᴐ Ahofadi ankasa sԑ wotwe woho fi Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde no Ho a?
Yehowa Adanseni bi a ᴐtwee ne ho fii Ahyehyԑde no ho bԑboro mfe aduonan a ᴐde nokwaredi somee, kae nkate a onyae wᴐ saa kwan yi so:
“Yehowa Adansefo yԑ nnipa a woani kum wᴐn som nnwuma ho na wonni adagyaw ma nneԑma a ԑgyegye wᴐn ani mpo. Medi wᴐn ho yaw efisԑ ԑsԑ sԑ wᴐtwԑn Yehowa efisԑ Me nni mmoa a mede bԑsakra eyinom a wᴐrehwehwԑ nkwagye ankasa. sԑ ԑyԑ ampa sԑ wᴐrehwehwԑ Ahenni no a nneԑma bԑsesa.
Wᴐte hᴐ twԑn bᴐs a ᴐde wᴐn bԑkᴐ nkwagye mu, na wokura “ticket” a wᴐabrԑ na wᴐhome. Ԑkame ayԑ sԑ woagye ᴐhyԑnkafo no nkaebᴐ adi sԑ “ԑnkyԑ biara yebetu” na sԑ wofi bᴐs no mu si fam a ԑyԑ aniwu, efisԑ aniwa biara hwԑ wo te sԑ nea wonni adwen. Bere a woasi fam awiei no, obiara hu sԑ nsakrae a wobԑyԑ ama woanantew ᴐkwan nsԑwee (pavement) no so nnyԑ mmerԑw, na ԑma wohu sԑ woannya nkyerԑkyerԑ a ԑmfata nkwagye a ԑno enti ԑsԑ sԑ wofi ase bio ma Yehowa ho dᴐ kԑkԑ a wowᴐ no ma awerԑhow bu w’abam. Continue reading “AHOFADI PAA – So wowᴐ Ahofadi ankasa sԑ wotwe woho fi Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde no Ho a?”
Author WebmasterPosted on February 22, 2013 March 29, 2013 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Gyidi ne Nnwuma, Mpaebɔ ԑkɔ Yesu nkyԑn, Nokware No, Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde
So Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde No Yɛ “Ɔnokwafo ne Ɔbadwemma A”?
Wↄ Mateo 24:45-51, Yesu kyerɛkyerɛɛ nkoa soronko abien (asomfo) a wↄn wura de wↄn sii n’afie agyapade so bere a ↄwↄ akwantuom. Akoa biako yɛe “Ɔnokwafo ne Ɔbadwemma” (Wiase Foforo Nkyerɛase-WFN) bere a ne wura fii akwantuom san bae no, nti ↄkamfoo no de no sii n’agyapade nyinaa so. Akoa ᴐfoforo no de, woannyɛ ᴐnokwafo bere a ne wura bae, enti ↄtowee no kↄkaa nyaatwomfo no ho.
Bere a biribiara nni ↄyɛsɛm yi mu a ɛkyerɛ sɛ nsɛm yi fa nyamesom ahyehyɛde ho no, Yehowa Adansefo ka sɛ ↄyɛsɛm yi yɛ nkᴐmhyɛ nsɛm a ɛkᾱ fa ᴐwɛn Aban Ahyehyɛde no ho. Wᴐka de hoahoa wↄnho sɛ Yehowa Nyankopↄn na ɛpawee wↄn Ahyehyɛde no sɛ ↄnfa honhom fam aduan mma Onyankopↄn nkurↄfo wᴐawiei mmere mu denam nhoma ne nsɛmma nhoma bebree a woatintim so.
So Honhom fam aduan no a ᴐwɛn Aban no de ma wᴐ ne nhoma ahorow mu kyerɛ sɛ ↄfata sɛ “Akoa Nokwafo ne ᴐbadwemma a”, Onyankopↄn akwan a ↄnam so ne adesamma di nsawↄso? Ma yɛnhwɛ kyerɛwtohↄ no na yehu nea ɛkyerɛ. Continue reading “So Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde No Yɛ “Ɔnokwafo ne Ɔbadwemma A”?”
Author WebmasterPosted on February 22, 2013 February 27, 2013 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Akoa Nokwafo, Akodi ne Amanyɔsԑm, Atoro Nkɔmhyԑ, Atorodi neTeokrase Akodi Pɔwbɔ, Mogya a wɔtwe gu Nipaduam, Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde
So Yesu Kristo Ͻne Ͻbɔfopɔn Mikael No?
Ͻwɛn Aban Asafo no kyerɛkyerɛ sɛ Yesu trae soro sɛ Ͻbɔfo Mikael ansa na ɔreba asase so, ɛnna afei ne wusɔre akyi no ɔsan bɛyɛɛ Ͻbɔfopɔn Mikael. Wɔka sɛ Yesu bɛyɛɛ Onipa nko ara wɔ asase so enti bere a owui no, sɛ Onipa no, wɔantra nkwa mu bio kosii sɛ wonyanee no bae nkwa mu sɛ honhom abɔde a ɛne Ͻbɔfopɔn Mikael:1.
“Enti adanse no kyerɛ pefee sɛ Onyankopɔn Ba no wɔfrɛɛ no Mikael ansa na ɔreba asase so, na afei nso wonim no sɛ Mikael bere a ɔsan kɔe soro a wɔahyɛ no anounyam sɛ Onyankopɔn Honhom Ba”-Reasoning from the Scriptures, 1985, Ͻwɛn Aban Bible ne Nhomawa Asafo, kratafa 218.
Ama wɔanya adanse a ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo Ͻne Ͻbɔfopɔn Mikael no, Yehowa Adansefo mpɛn pii fa nsɛm te sɛ nea ɛwɔ Daniel 10:13, a wodaa Mikael adi sɛ Ͻbɔfo Asafohene no mu biako”. Nokwasɛm a ɛne sɛ Mikael yɛ Asafohene no mu biako mpo nkyerɛ sɛ Mikael yɛ soronko. Yesu sen Obi a ɔyɛ Asafohene anaa Sodifo. Kyerɛwnsɛm no frɛ Yesu Kristo sɛ Ahene mu Hene ne Awuranom mu Awurade. (Adiyisɛm 17:14) Saa abodin kyerɛɛ obi a ɔyɛ Ɔtumfoɔ Kɛse wɔ tumi ne anounyam mu, a ɛno nti entumi nyɛ yiye koraa sɛ ɔyɛ Ͻbɔfopɔn no mu biako a ɔwɔ n’afimpamfo a ɔne wɔn sɛ. Continue reading “So Yesu Kristo Ͻne Ͻbɔfopɔn Mikael No?”
Author WebmasterPosted on February 21, 2013 December 23, 2015 Categories Ɔsԑmpaka, Yehowa Adansefo Ho Nsεmma NhomaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyankopɔn Baasakoro No
Dԑn na ԑbԑyԑ sԑ Wobenya Nkwagye Wɔ AWIEI NO?
“Yehowa Adansefo Nkutoo…na wɔwɔ Kyerԑwnsԑm no mu anidaso sԑ wobenya nkwagye wɔ wiase bɔne nhyehyԑe a ԑreba n’awiei ntԑm ntԑm…”Ɔwԑn Aban September 1, 1989, kr.19
“Yesu mfe Apam Ahenni bere mu no nnipa anokwafo bԑyԑ adwuma adan asase mu nyinaa ma ayԑ Paradise”-Dԑn na Onyankopɔn Hwehwԑ Fi Yԑn Hɔ? kr. 11 Continue reading “Dԑn na ԑbԑyԑ sԑ Wobenya Nkwagye Wɔ AWIEI NO?”
Author WebmasterPosted on February 21, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Harmagedon ne Awie No, Nkwagye
Wobԑyԑ dԑn Anya NKWAGYE Wɔ Harmagedon?
“Asԑmmisa a ԑyԑ aniberesԑm ne sԑ: Wobenya Nkwagye wɔ Harmagedon sԑe no akɔnya asomdwoe a enni awiei? Wobetumi Abisa sԑ,”Dԑn na ԑsԑ sԑ meyԑ na manya Nkwagye?”-Ɔwԑn Aban February 15, 1985, kr.7
Hena na Obenya Nkwagye?
“…nsԑm no mu da hɔ fann. Saa yԑpԑ sԑ yenya Nkwagye wɔ Harmagedon a ԑsԑ sԑ yԑma yԑn ani da hɔ honhom mu na yԑbɔ yԑn sԑnkyerԑnne kwan so ntade a ԑma yԑda yԑnho adi sԑ Yehowa Adansefo Anokwafo no”-Ɔwԑn Aban December 1, 1999, kratafa 18.
Hena Atade Na Wohyԑ? Wo dea Anaasԑ Kristo dea?
“Na yԑbԑyԑԑ te sԑ nnipa bi a wɔnho ntew, yԑn nyinaa, yԑn adetreneeyԑ te sԑ bratam”-Yesaia 64:6 WFN Continue reading “Wobԑyԑ dԑn Anya NKWAGYE Wɔ Harmagedon?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 July 23, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Harmagedon ne Awie No, Nkwagye
Kristofo a Wodii kan no Wɔbɔɔ Onyankopɔn Ankasa Din?
“Kristo Hela Kyerɛwnsɛm, Apam Foforo no…tete nsaano nkyerɛwee a efi Mateo nhoma kosi Adiyisɛm a yɛwɔ no nnɛ mu biara nni hɔ a Onyankopɔn Din no puee wɔ pefee”-Divine Name that will Endure Forever 1984, kratafa 23
Saa Kristofo Wodii kan no de Onyankopɔn din dii dwuma a, ɛnde adɛn nti na enni bɛboro 5000 Hela nsaano nkyerɛwee nyinaa a yɛwɔ no nnɛ a ebi fii bɛyɛ afeha abien a abɛsen kɔ no mu? Adɛn nti na ayera afi bɛboro 3600 Kyerɛwnsɛm nyinaa no bi a woyiyii de foa nsɛm so a Asɔre no Agyanom a wodii kan ansa na afeha anan no de dii dwuma no mu? Continue reading “Kristofo a Wodii kan no Wɔbɔɔ Onyankopɔn Ankasa Din?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Woredɔ Yehowa
So wowɔ Nokware no Mu?
“..na yɛwɔ ne mu nea ɔno yɛ Nokware, ne Ba Yesu Kristo. Eyi yɛ nokware Nyankopɔn ne nkwa enni awiei”-1 Yohane 5:20 WFN
“Monsɔ monho nhwɛ nhu sɛ mowɔ gyidi no mu, mopɛɛpɛɛ momu nhwɛ Anaasɛ monhuu wɔ momu sɛ Yesu Kristo te momu– nokware sɛɛ gyesɛ moanyɛ saa nhwehwɛmu”-2Korintofo 13:5 WFN
So Nokware no yɛ Onipa anaasɛ Ɔsom?
“Yesu kae kyerɛɛ wɔn sɛ: Mene ɔkwan no ne nokware no ne nkwa no Obiara mma Agya no nkyɛn gyesɛ ɔnam Me so”-Yohane 14:6 WFN Continue reading “So wowɔ Nokware no Mu?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nokware No
So Woyɛ Nokware Yehowa Ɔdansefo?
“Mone m’adansefo, Yehowa anom asɛm ni, makoa a mapaw no sɛnea ɛbɛyɛ mobɛte ase sɛ Me ara Ne obiako No, M’anim wɔnnwenee Onyankopɔn biara na makyi nso wɔnnwenee bi. Me Mene Yehowa na makyi ogyefo biara nni hɔ”–Yesaia 43:10-11. WFN
Yehowa Ɔdansefo wɔ Dɛn ho Ntease?
Continue reading “So Woyɛ Nokware Yehowa Ɔdansefo?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyankopɔn Baasakoro No
Woyɛ Sotie Ma Yehowa?
“Na wɔn nyinaa benya nkyerɛkyerɛ afi Yehowa hɔ. Obiara a w’ate afi Agya no nkyɛn no na wasua no ba Me nkyɛn”-Yohane 6:45 Wiase Foforo Nkyerɛase.(WFN)
“Yesu kae sɛ abofra wɔde wo bɔne afiri wo…ebinom esusuwii wɔ wɔn komam Ɔreka abususɛm. Hena na otumi de bɔne firi gyesɛ obiako, Onyankopɔn? Nanso Yesu kae kyerɛɛ wɔn sɛ Dɛn nti na moredwennwen sɛ …Onipa Ba no wɔ tumi de bɔne firi..”
—Mark 2:5-10, NWT
Continue reading “Woyɛ Sotie Ma Yehowa?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Mpaebɔ ԑkɔ Yesu nkyԑn, Nipakō Yesu Kristo yɛ
Ehe na Paradise Wɔ?
“Nnipakuw kɛse no a wobenya nkwa wɔ Onyankopɔn da kɛse mu kō no wɔ asase so benya hokwan ara kwa de wɔn aniwa ahu Abraham ne Isak ne Yakob ne Adiyifo no nyinaa wɔ Paradise asase so bio..”Ɔwɛn Aban August 15, 1989, kratafa,18
Wɔde Paulo kɔɔ Paradise wɔ asase so anaasɛ ɔsoro?
“Minim onipa bi a-sɛ honamdua mu oo ɛno de minnim anaasɛ sɛ honhom mu oo minnim Onyankopɔn na onim-wɔde no kɔe beae foforo a ɔyɛ ɔsoro abiɛsa, Yiw Minim onipa bi a …wɔde no kɔe Paradise mu”–2Korintofo 12:2-4 WFN
Continue reading “Ehe na Paradise Wɔ?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Paradise ne Ahenni no
So Wode Yehowa Nhyehyɛe a Woayɛ ama Nkwa yɛ Adwuma?
“Yesu faa abodoo…ɔkae sɛ Gye di. Eyi kyerɛ Me nipadua. Bio nso ɔfaa kuruwa no….kae sɛ monom ano mo nyinaa, efisɛ eyi yɛ Apam no ho mogya a wobehwie agu ama nnipa bebree ama bɔnefafiri”-Mateo 26:26, 28 WFN
Dɛn ne Yehowa Nhyehyɛe ma Nkwa?
“Eyi ne Me Ba a Medɔ No no munntie No”–Marko 9:7 WFN
“Nokware Meka akyerɛ mo sɛ Gyesɛ modi Onipa Ba no honam na monom ne mogya monni nkwa wɔ momu”–Yohane 6:53 WFN
So wotie Oba no asɛm denam ne Apam foforo a wokᾱ ho no? Continue reading “So Wode Yehowa Nhyehyɛe a Woayɛ ama Nkwa yɛ Adwuma?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye
So wowɔ Onyankopɔn Honhom?
“…woama yɛn nso antumi anya honhom abawo sɛ mma. Seesei esiane sɛ yԑyɛ mma, Onyankopɔn asomaa ne Ba no Honhom abatraa yɛn komam a yɛteɛɛm sɛ “Abba’ Agya”-Galatifo 4:5-6 WFN
“Efisɛ wɔn nyinaa a Onyankopɔn Honhom kyerɛ wɔn kwan no wɔn na wɔyɛ Onyankopɔn mma”-Romafo 8:14 WFN
Continue reading “So wowɔ Onyankopɔn Honhom?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye
4Jehovah (Yehowa) Terms and Conditions	Proudly powered by WordPress